ကျော်ကြီး ပြောပြမယ့် ကွန်ဒုံး အထာကျကျ စွန့်ပစ်နည်း | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး ကျော်ကြီး ပြောပြမယ့် ကွန်ဒုံး အထာကျကျ စွန့်ပစ်နည်း
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ (ဒီထဲမှာ ကျွန်တော့်လို ဆရာကြီးတွေရော၊ တစ်ခါမှ လူပျိုရည်မပျက်ဖူးသေးတဲ့ လူလိမ္မာလေးတွေအပါအဝင်) အားလုံးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ပစ်ထားတဲ့ သုံးထားပြီးသား ကွန်ဒုံးတွေကို မြင်ဖူးတဲ့သူတွေ ဘယ်နှယောက်လောက်များ ရှိကြလဲ?
သေချာတာကတော့ မမြင်ဖူးတဲ့သူ မရှိသလောက်ဆိုတာကို ကျွန်တော် ရဲရဲကြီး လောင်းရဲတယ်ဗျာ… ဘယ့်နှယ် ကတ္တရာလမ်းမတွေဘေးမှာ၊ ချုံပုတ်နားတွေမှာ၊ အမှိုက်ပုံတွေနားမှာ ပြီးပြီးရော ပစ်စလက်ခတ် သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံးတွေ မြင်ရတာ ခင်ဗျားတို့တော့ မသိဘူး… ကျွန်တော်ကတော့ အော့နှလုံးနာလိုက်တာမှ လွန်ရော!
နောက်ပြီး ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို မိန်းမနဲ့ ကလေးနဲ့… သူ့မိန်းမနဲ့ ကွန်ဒုံးသုံး ဒချိပြီး သုံးပြီးသား ညစ်တီးညစ်ပတ်ဟာကြီးကို လွယ်လင့်တကူ လွှင့်ပစ်ထားတာကို သူ့သားလေးက တွေ့… အဲ့ဟာကြီးကို ကောက်လာပြီး “ဖေဖေ မေမေ ဒါလေးက ဘာလဲဟင်” ဆိုပြီး သူ့ကို လာမေး… အဲ့တော့ သေရောပေါ့! ရှင်းရှင်းပြောရရင် သာမန်မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်တွေကနေ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်တွေကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံလာရတဲ့အခါမှာ ဒီကိစ္စက ပေါ့ပေါ့လေးတွေးလို့ မရတာတော့ အသေအချာပဲ။ ပြောချင်တာက ချိဖတို့အနေနဲ့ ဒီလို သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံးတွေကို ပေါက်ပန်းလေးဆယ် ပြီးကပစ် လွှင့်ပစ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်အရရော၊ လူမှုရေး ရှု‌ထောင့်အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ မြွေဆိုးလေးဆောင်းထားပြီးသား ဦးထုတ်တွေကို ဘယ်လို စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ အထာကျကျ ဝဲပစ်ကြမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျော်ကြီးရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့အညီ အကောင်းဆုံး နည်းစနစ်တွေကို ကာလသားတွေကို ပြောပြပေးသွားမယ်ဗျာ…
(၁) ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ငယ်ငယ်က မိုးပျံပူဖောင်းမှုတ်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ လေမှုတ်သွင်းပြီးတာနဲ့ လေတွေ ပြန်ထွက်မသွားအောင် ပူဖောင်းထိပ်လေးကို လက်နဲ့ အသေချည်တတ်ကြတယ် ဟုတ်! အဲ့လိုမျိုးပဲ ဒချိပြီး ကွန်ဒုံးကို မြွေဆိုးလေးကနေ ချွတ်ပြီးတာနဲ့ အထဲက သုက်ရည်တွေ ထွက်မကျအောင် နဲ့ အနံ့အသက်တွေ မထွက်အောင် သေချာဂရုစိုက်ပြီး ကွန်ဒုံးထိပ်ကို အသေသာ ချည်လိုက်ပါ… ဒါက ပထမဆုံး လုပ်ရမယ့် အချက်…
(၂) ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ အသေ ချည်ထားပြီးသား ကွန်ဒုံးကို တစ်ရှူးထူထူနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သတင်းစာစက္ကူနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စက္ကူအိတ်နဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာထုတ်ပိုးပြီး အမှိုက်ပုံးထဲကို ထည့်လိုက်! ဒီနေရာမှာ ကျော်ကြီးက တူမောင်တို့ကို ကွန်ဒုံးပစ်တဲ့နေရာမှာ ပလက်စတစ်အိတ်တော့ တတ်နိုင်ရင် မသုံးစေချင်ဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပလက်စတစ်အိတ်တွေက ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေ၊ ရေမြောင်းပိတ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့်လဲ ကိုယ့်အနီးအနားမှာ စက္ကူတို့ တစ်ရှူးတို့လို အရာမျိုးတွေ အလွယ်တကူ မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လဲ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ဒီအတိုင်း ပြီးပြီးရော ပစ်တာထက်စာရင် ပလက်စတစ် အိတ်နဲ့ ပစ်တာ ပို စိတ်ချရတယ်လေ။ နောက်ဆုံး ကျော်ကြီး အကြံပေးချင်တာက ဒချိဖို့တောင် ကွန်ဒုံးဝယ်သုံးနေမှတော့ သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံးပစ်ဖို့ စက္ကူတို့ တစ်သျှူးတို့ကို ဆောင်ထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ ချိဖတို့ရေ!
ဘာကြောင့် သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံးကို ဒီလို စနစ်တကျ ပစ်သင့်တာလဲ?
ချိဖတို့အနေနဲ့ သုံးထားပြီးသား ကွန်ဒုံးတွေကို စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ပစ်တဲ့အခါ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လဲ ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတွေ ဖြစ်မယ်၊ ပြီးတော့ ဒီလို သေချာစွန့်ပစ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ ကွန်ဒုံးတွေိကို ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ထိတွေ့မိခဲ့ရင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ နဲ့ တခြားကူးစက်ရောဂါတွေ ရနိုင်တဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အန္တရာယ်တွေ အများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အန္တရာယ်တွေကြောင့် သုံးထားပြီးသား ကွန်ဒုံးတွေကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်သင့်တာပါ ဘော်ဒါတို့!
ဒါဆို သတိပြုရမယ့် အချက်တွေရော ရှိသေးလား?
သတိပြုရမယ့် အချက်ဆို သိပ်ရှိတာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါကတော့ ကားပေါ်မှာ ဒချိလေ့ရှိတဲ့ တချို့သော စကေးကြမ်းတဲ့ ဘော်ဒါတွေအနေနဲ့ ဒချိပြီး ကွန်ဒုံးချွတ်ပြီးတာနဲ့ ကားမှန်အပြင်ဘက်ကို လွှင့်မပစ်နဲ့ဗျာ! အဲ့တာက စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ပစ်တာနဲ့ တူတူပဲ။ ဒီတော့ ခုနကပြောသလိုပဲ တစ်ခုခုနဲ့ သေချာထုတ်ပိုးပြီး အမှိုက်ပုံးရှိတဲ့ နေရာရောက်မှ အမှိုက်ဗုံးထဲ ထည့်! အိုကေ!
ပြီးတော့ ဖြစ်လေ့ရှိကြတာ နောက်တစ်ခု… အဲ့တာက အိမ်သာထဲကို ပစ်တဲ့ကိစ္စ… ဟိုတယ်တွေမှာ အများဆုံး ကြုံကြလေ့ရှိတယ်။ အိမ်သာဆို ရိုးရိုးထိုင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘိုထိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အိမ်သာထဲကိုမှ ကွန်ဒုံးပစ်လို့ မရဘူး။ အဲ့တာ အိမ်သာပိုက်လိုင်းပိတ်ပြီး ရှော့အကြီးကြီး တက်မယ့် ကိစ္စဗျ… သတိပြုရမှာဆိုရင်တော့ အဲ့နှစ်ချက်ပဲ။
ကဲ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်း ရောင်းရင်းတွေကို သုံးပြီးသား ကွန်ဒုံး စနစ်တကျ ပစ်တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ ကျော်ကြီး ‌ပြောပြချင်တာကတော့ ဒီလောက်ပဲ။ ကျော်ကြီးပြောသလို တူမောင်တို့ လိုက်နာကြမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်တယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး သိချင်တာရှိရင်တော့ သိလိုရာမေး ချက်ဘောက်မှာ လာမေးလှည့်… ကျော်ကြီး အသင့်ရှိနေမယ်…